ချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့် တရုတ်အဝေးထိန်း Tuya စမတ်တံခါးသော့ထုတ်လုပ်သူများ - Zhechi Electric
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွေ့အကြုံ 12 ခုရှိသော Remote Control Tuya Smart Door Lock ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 စံနှုန်းကိုလိုက်နာပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် Intertekwith CE နှင့် CB Certificate ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မီပါသည်။ MOQ သည် 1 pc ဖြစ်သည်။
လျှော့စျေး Remote Control Tuya Smart Door Lock ကို China ပေးသွင်းသူများထံမှ ဝယ်ယူပါ။
Remote Control Tuya Smart Door Lock အတွက် အခြေခံအချက်အလက်
1. မော်ဒယ်- ZCN3F အဝေးထိန်းခလုတ် Tuya စမတ်တံခါးလော့ခ်
2. အရောင်: အနက်ရောင်/ငွေ/ရွှေ
3. အဖွင့်နည်းလမ်းများ- လက်ဗွေ/ စကားဝှက်/ကတ်များ/ ဘလူးတုသ် အက်ပ်/ စက်ခလုတ်များ
4. ဘာသာစကား- တရုတ်/အင်္ဂလိပ်/စပိန်
Remote Control Tuya Smart Door Lock အတွက် ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
အိမ်မှာမနေဘဲ အိမ်မှာနေချင်ရင် Remote Control Tuya Smart Door Lock
တံခါးပေါက်မှတစ်ဆင့် သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် သင်၏လိုအပ်ချက်ကို ကောင်းမွန်စွာ ကျေနပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သော့ဖွင့်ခြင်း၊ ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ ယာယီစကားဝှက်ပေးခြင်း၊ သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာသတိပေးချက်များကို ရယူနိုင်သည်။ ဒါဟာ တကယ့်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ အိမ်စောင့်တပ်ပါ။
Remote Control Tuya Smart Door Lock အတွက်အင်္ဂါရပ်များ
လော့ခ်ချရန် နည်းလမ်း6ခု- လက်ဗွေ၊ စကားဝှက်၊ ကတ်(Mifare-1)၊ စက်ခလုတ်များ၊ အဝေးထိန်းခလုတ်၊ မိုဘိုင်းအက်ပ် (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)
အရောင်- ရွှေ၊ ငွေ၊ အညို၊ အနက်
အဆင်ပြေသော APP စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ သင်သည်သင်၏စမတ်လော့ခ်ကိုအချိန်မရွေးနေရာမရွေးစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခတ်မှုများအစား ZIGBEEE module မှတစ်ဆင့် သင်၏အခြားအိမ်အပလီကေးရှင်းများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
သင့်စမတ်အဆောက်အဦများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကူညီရန် အဆင့်ပေါင်းစုံ စီမံခန့်ခွဲသူ ဆက်တင်များ။
မေးမြန်းသော့ဖွင့်ခြင်း မှတ်တမ်းများကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး၊ သင်၏အိမ်လုံခြုံရေးကို ပထမဆုံးသိရှိရန်၊
ကျစ်လစ်သောအရွယ်အစားသည် သစ်သားတံခါးများနှင့် သတ္တုတံခါးများအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
FPC လက်ဗွေဖတ်စက်သည် သင့်အား အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်မှုကို OEM/ODM၊
ဇီဝမက်ထရစ်လက်ချောင်းစကင်နာပါရှိသော ရီမုတ်ကွန်ထရိုး Tuya စမတ်တံခါးလော့ခ်
1 ထုတ်ကုန်အမည် ဒစ်ဂျစ်တယ်လော့ခ်များ
2 မော်ဒယ်နံပါတ် ZCN3F
3 Unlock လုပ်နည်းများ လက်ဗွေ၊ စကားဝှက်၊ ကတ်(Mifare-1)၊ စက်ခလုတ်များ၊ ဘလူးတုသ် အက်ပ်၊
4 အရွယ်အစား H 287mm*W67mm
5 ပစ္စည်း ဇင့်အလွိုင်း
6 အရောင် ရွှေ၊ ငွေ၊ အညို၊ အနက်
7 လက်ဗွေရာ အလုပ်အပူချိန် -20ºC~85ºC
အစို 20% ~ 80%
လက်ဗွေရာ စွမ်းရည် 100
မှားယွင်းသော ငြင်းပယ်မှုနှုန်း (FRR) â‰¤1%
မှားယွင်းလက်ခံမှုနှုန်း (FAR) â‰¤0.001%
8 စကားဝှက် စကားဝှက် အရှည် 6-8 ဂဏန်းများ
စကားဝှက် စွမ်းရည် 50 အဖွဲ့များ
9 ကတ် ကတ်အမျိုးအစား Mifare-1
10 မိုဘိုင်းအက်ပ် TT ဘလူးတုသ်လော့ခ် 1pcs
11 လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား AA ဘက်ထရီ (1.5V*4pcs)
ဘက်ထရီသက်တမ်း လည်ပတ်ချိန် 10000
ပါဝါနည်းသော သတိပေးချက် â‰¤4.8V
12 ပါဝါစားသုံးမှု Static Current â‰¤65uA
Peak Current <200mA
စိုထိုင်းဆ အလုပ်လုပ်ခြင်း။ 20% ~ 90%
13 ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် စမတ်တံခါးသော့ ၁ ချပ်
3pcs Mifare Crystal Card;
1pcs Zigbee မော်ဂျူး (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)
hot Tags:: အဝေးထိန်းစနစ် Tuya စမတ်တံခါးသော့ခတ်၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ တင်သွင်းသူများ၊ စတော့ရှယ်ယာတွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်